सुरु भयाे लघुकथा प्रतियोगिताकाे चाैधाैँ चरण, आमन्त्रित निर्णायकमा डा. राजेन्द्र विमल | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट प्रकाशित २८ जेष्ठ २०७८ १९:०१
चाैधाैँ साताको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ । यो प्रतियोगिता साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।
प्रतियोगिताकाे चाैधाैँ साताकाे लागि वातावरणलाई विषय बनाइएको छ । गत जेठ २२ गते (जुन ५) का दिन पर्न गएकाे विश्व वातावरण दिवसकाे अवसरमा यस साताकाे विषय वातावरणलाई बनाइएकाे निर्णायक मण्डलले जनाएकाे छ । यस चरणमा प्रतियोगी कथाकारहरूले वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर लघुकथाकाे कथानक बनाउनुपर्ने छ ।
चौधौँ साताकाे प्रतियोगिताका लागि प्रमुख निर्णायकमा साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल रहनुभएकाे छ । डा. विमलको जन्म सन् १९४७ मार्च २६ देवीचोक, जनकपुरमा भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली विषयका प्राध्यापक विमल गत चार दशकदेखि मिथिला क्षेत्रमा मैथिली भाषी विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषामा शिक्षित गराउँदै आउनुभएकाे छ ।
नेपाली भाषामा अनेकानेक ग्रन्थ रचना गरी नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समृद्ध तुल्याउने काम गरिरहेबापत उहाँलाई ‘जगदम्बा-श्री २०६६’ बाट सम्मानित गरिएको थियो । साथै, कथालेखनमा लामो समयदेखि सक्रिय उहाँलाई मधेश भूमिको सुरुचिपूर्ण कथामार्फत नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएबापत ‘मधुपर्क सम्मान २०७६’ द्वारा समेत सम्मान गरिएकाे छ ।
एकपटक पुरस्कृत भइसक्नुभएका कथाकारहरूले यस प्रतियोगितामा पुनः सहभागिता जनाउने पाउनु हुने छैन । तर “अप्रतियोगी”का रूपमा आफ्नाे सिर्जनाकाे माथिपट्टि “अप्रतियोगी लघुकथा” लेखेर भने आफ्नाे कथा पाेस्ट गर्न सक्नुहुने छ ।
लघुकथामा रुची भएका साहित्यकारहरुले वातावरणसँग सम्बन्धित आफ्ना लघुकथाहरुलाई तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुपर्ने छ । तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट तीन लघुकथाहरु छानिने छन् । हरेक साता छानिने ती उत्कृष्ट कथाहरुलाई आगामी वर्ष वर्षका उत्कृष्ट लघुकथाका रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।
सुरु भयाे लघुकथा प्रतियोगिताकाे तेह्राैँ चरण, आमन्त्रित…
साहित्यपोस्ट १९ जेष्ठ २०७८ २०:०१
ख) यसपटकको लघुकथाको विषय वातावरण रहेको छ । लघुकथाहरुकाे शीर्षक फरक फरक भए पनि कथाले कुनै न कुनै रूपमा वातावरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने छ ।
छ) यो प्रतियोगिताको समय अहिलेदेखि सुरु भएर असार ४ गते (शुक्रबार) राति ११ बजेर ५९ मिनेटसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पोस्ट गरिएको कथालाई मान्यता दिइने छैन ।
कारागारबाट प्रेमिकालाई पत्र – ‘मेरो जीवन अँध्यारो भयो, तिम्रो उज्यालो होस् सानु !’